Dhoolatuskii xisbiga KULMIYE ee goboladda dalka | Somaliland.Org
Dhoolatuskii xisbiga KULMIYE ee goboladda dalka
November 1, 2012	Hargeysa, (Somaliland.Org)- Gobollada iyo degmooyinka Somaliland ayaa shalay waxa isu soo baxyo balaadhan ka sameeya taageerayaasha Xisbiga talada dalka haya ee Kulmiye, kuwaasoo sitay calamada xisbiga Kulmiye iyo sawirrada musharixiinta u sharaxan doorashada goleyaasha deegaanka ee dhawaan dalka qabsoomi doonta.
Waxaanu wargeyska Dawan isku soo miinguuriyay hanaankii ay taageerayaasha Xisbga Kulmiye uga qaybgaleen maalinta ololaha doorashada ee xisbigaas.
Burco Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Nuur Caraale (Duur) iyo wafti uu hugaaminaayay oo ka tirsan xisbiga Kulmiye iyo golaha baarlamaanka Somaliland ayaa taageerayaasha xisbigaas ee gobolka Togdheer kala qaybgalay banana-baxa ololaha doorashadda golaha deegaanka oo gashay maalintii Saddexaad.
Taageerayaasha Xisbiga Kulmiye ee magaalada Burco oo tiradoodu badnayd ayaa isugu tagay fagaaraha Khayriyadda Burco, halkaasoo ay kala hadleen musharixiinta golaha deegaanka Xisbiga Kulmiye uga sharaxan degmadda Burco, weftiga Xukuumadda ka socday masuuliyiinta Kulmiye iyo maamulka gobolka Togdheer.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Maxamed Nuur Caraale (Duur) oo fagaarahaas kala hadlay taageerayaasha Xisbiga Kulmiye ayaa sharaxaad ka bixiyay mashaariicda waxqabad ee Xukuumadda Kulmiye ka fullisay gobolka Togdheer, waxaanu kula dardaarmay Taageerayaasha inay xil adag iska saaraan xoojinta nabadgelydada gobolka. “Waxaan idin xusuusinayaa waxaad tihiin taageerayaashii xisbiga talada haya ee Kulmiye, waxa laydiinka baahan yahay tudhaale gaar ah in aad la timaadaan oo aad idinku noqotaan qaar dulqaata oo nabada ilaaliya oo wanaaga dhawra iyo wada noolaanshaha, waayo masuuliyad gaar ah ayaa idin saaran dhamaana xisbiyada walaalo ayaynu nahay codkana waynu ku tartamaynaa, walaalnimada shacabka iyo isku xidhnaantuna dhimanmayso codkeenana waynu la soo baxaynaa qaranimadeenana waynu ilaashanaynaa ” ayuu yidhi Wasiirku.
Wasiirka ayaa sheegay muddadii ay xilka haysay Xukuumadda Kulmiye ee Madaxweyne Axmed Siilaanyo uu hogaamiyaa inay dalka wax badani iska bedeleen, isla markaana ay mashaariic ka fulisay gobolka Togdheer, taasoo uu xusay inay lacagtii Giinbaartu u horeysay, waxaanu ku adkeeyay taageerayaasha Xisbiga Kulmiye inay awoodda saaraan sidii ay musharixiinta xisbiga ee Degmadda Burco usoo saari-lahaayeen, iyagoo aqoontooda ku dooranaaya.
Badhasaabka gobolka Togdheer Cabdoo Axmed Aayar oo isna halkaas ka hadlay ayaa ku wargaliyay taageerayaasha xisbiga Kulmiye ee gobolka Togdheer inay awoodda saaraan sidii ay codkooda usiin lahaayeen 21-ka musharax ee golaha deegaanka Burco uga sharaxan, kuwaasoo uu xusay inay khibrad aqooneed u leeyihiin hawsha ay u taagan yihiin, waxaanu dadweynaha gobolka usoo jeediyay inay dhinaca amniga kala shaqeeyaan ciidamadda booliska.
Sidoo kale, waxa ka mid ahaa masuuliyiintii halkaas ka hadlay Guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee xisbiga Kulmiye Muj. Maxamed Kaahin Axmed ,Xildhibaan Cali Mareexaan, Guddoomiyaha Kulmiye ee gobolka Togdheer iyo musharixiinta golaha deegaanka Burco u taagan ee xisbiga Kulmiye waxaanay dhamaantood ka xog-warameen awoodda xisbiga Kulmiye ee gobolka Togdheer, waxyaabihii uu qabtay dhawrkii sanno ee uu xilka hayay iyo himilooyinkiisa dambe, waxaanay u mahad-naqeen sida ay taageerayaasha Kulmiye cududdooda u muujeyeen.
Magaalada Ceerigaabo ee Gobolka Sanaag ayay taageerayaasha xisbiga kulmiye ay shalay isugu soo baxeen fagaaraha beerta xorriyadda ee magaaladaas.
Waxaana isu soo baxa taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada ceerigaabo kala qayb galay wasiirka wasaaradda Gaashaan-dhiga Axmed Xaaji Cali Cadami, Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Reer Miyiga Maxamuud Siciid Gacamay, Guddoomiye ku-xigeenka Saddexaad ee Kulmiye Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle, guddoomiyaha Gobolka Sanaag, masuuliyiinta xisbiga ee gobolka, musharaxiintii xisbiga kulmiye uga loolamaya golaha deegaanka degmada Ceerigaabo iyo Salaadiin Cuqaal aqoonyahanno iyo Waayeel tiro badan.
Waxa ugu horeyn Taageerayaasha Xisbiga Kulmiye Fagaarahaas kala hadlay Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye ee Gobolka Sanaag Maxamed Cawed Faarax oo halkaas ka sheegay sida uu ugu faraxsan yahay Cududa iyo awoodda aan beenta ahayn ee Xisbigoodu ku soo bandhigeen guud ahaanba fagaarayaasha degmooyinka Gobolka Sanaag, Waxaanu intaa raaciyey inaanay wax shaki ahi kaga jirin ka mid noqoshada saddexda xisbi qaran ee dalku yeelan doono.
Waxa iyaguna halkaas ka hadlay xubno aad utiro badan oo ku hadlayay afka murashaxiinta golaha deegaanka xisbiga kulmiye oo dhamaantoodba halkaas kusoo bandhigay barnamijkooda siyaasaddeed ee ku wajahan hanashada codadka bulshada iyo doorkooda wax qabadba.
Gudomiyaha gobolka Sanaag Aadan Diiriye Cigaal oo isna halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay sida aanay marnaba u wiiqmi doonin awoodda iyo taageerada xisbiga kulmiye,
Guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye Cabdirahmaan Maxamed Talyanle ayaa isaguna ku nuux-nuuxsaday sida xisbigoodu tartan xalaal ah oo kalsooni ugu dheehan tahay garoonka ugu soo gelayaan oo hantida qarankana ay kala siman yihiin ururrada kale, si aan loogu andacoon marka la kala adkaado hantidii qarankaa nalagula dagaalamay.
Wasiirka Wasaaradda Gaashaan-dhiga oo isna fagaarahaas ka hadlay ayaa isaguna ka sheekeeyay waxqabadkii iyo horumarkii xisbigoodu ku talaabsaday muddadii koobnayd ee ay xilka hayeen, isagoo ururrada ugu baaqay inay garoonka ciyaarta lasoo galaan ciyaar hufan oo aan xanaaq lahayn.
Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo horumarinta Reer Miyiga Dr. Maxamuud Siciid Gacamay ayaa isaguna ku baanay in xisbiga kulmiye uu yahay xisbi awood iyo cudud iyo taageeraba ka haysta dhamaanba bulshawaynta Somaliland iyo in kalsoonidii shacbigu hogaankii dalka ugu dhiibeen ay halkeedi tahay.
Intaa kadibna waxa taageerayaasha xisbiga kulmiye socod dhoola tus ah ay kusoo mareen gebi ahaanba jidadka iyo shaarac yada waaweyn ee magalada Ceergaabo, halkaasoo ay ku muujiyeen awooddooda taageero ee ay ku dhex leeyihiin guud ahaanba gobolka iyo magaalada Ceergabo. Sidoo kale, degmooyinka Badhan, Dhahar, Laasqoray, Ceelefwayn, iyo Gar-adag ayaa iyaguna taageerayaasha xisbiga kulmiye ay wacdaro ka muujiyeen fagaarayaasha degmooyinkaas. Gabiley
Kumanaan taageerayaasha xisbiga Kulmiye ah ayaa shalay isugu soo baxay fagaaraha khayriyadda magaalada Gabiley halkaasoo ay kala hadleen masuuliyiin uu hormood u yahay Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Wacyigelinta iyo Dhaqanka Abiib Diiriye Nuur (Timacad), waxaanu sheegay in dadweynaha looga baahan yahay taageeradooda la garab istaagaan xisbiga Kulmiye.
Dhinaca kale, magaalada Boorama ee Gobolka Awdal ayay isugu soo baxeen taagerayaal tiro badan, kuwaasoo ay kala qaybgaleen isu-soo baxaas Wasiiradda Xukuumadda kaga jira gobolkaas.
Sidoo kale, magaalooyinka Laascaanood, Berbera, Oodweyne ayay isugu soo baxeen taageerayaasha Xisbiga talada dalka haya ee Kulmiye, iyadoo goobahaas ay kala hadleen masuuliyiinta heer gobol, kuwaasoo ku booriyay inay codkooda ugu hiiliyaan xisbiga Kulmiye.
Previous Post‘UDUB waxa uu go’aansaday inaanu kala godobsan axsaabta, Waran-caddena ma matallo xisbiga’Next PostBadhasaabka Awdal Oo Qoonsaday Hubkii Taliska Boolisku sheegeen in lagu qabtay Boorame	Blog